Afrin vs. Flonase: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Fiaraha-Monina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Orinasa Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fiaraha-Monina, Fahasalamana Lalao Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Vaovao, Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Community, Company Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets News
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Afrin vs. Flonase: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Afrin vs. Flonase: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Ny fitohanana eo amin'ny orona dia mitranga rehefa manjary tototry ny tsiranoka be loatra ny lalan-dra sy ny vatan'ny lalan'ny orona. Izany dia miteraka fahatsapana tsy mitombina na tampina ao anaty orona, izay mety hanasarotra ny fifohana rivotra. Ny fitohanana eo amin'ny orona dia mety miaraka amin'ny orona mihosin-dranomandry, mievina, kohaka na aretin'andoha.
Afrin (oxymetazoline) sy Flonase (fluticasone propionate) dia tsiranoka avy amin'ny orona izay afaka manome soritr'aretina mifandraika amin'ny fitohanana orona. Na dia tsifotra orona aza izy roa dia samy hafa be ny fomba fanamaivanan'izy ireo ny fitohanana.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny Afrin sy Flonase?
Ny akora mavitrika ao Afrin, oxymetazoline, dia agonista alpha-adrenergic. Rehefa ampiasaina amin'ny loha-hevitra ao amin'ny orona nasal dia vasoconstrictor izy io. Izany dia miteraka fihenan'ny fikorianan'ny tsiranoka mankamin'ny sela sy ny lalan-drà amin'ny lalan'ny orona, ary koa ny fisokafan'ny lalan-drivotra.
Afrin dia mandaitra ao anatin'ny 10 minitra monja, ary mety haharitra 12 ora ny vokany. Na dia decongestant tena mandaitra aza izy io dia misy porofo manamarina fa mety hiteraka fitohanana io rehefa ampiasaina mandritra ny telo andro. Noho izany dia tsy tokony hatao ny fampiasana maharitra. Afrin dia misy amina karazana vahaolana fofona orona misy oxymetazoline 0,05%. Misy haben'ny fonosana 15 ml sy 30 ml. Afrin dia misy amin'ny alàlan'ny fivarotana (OTC) tsy misy dokotera. Afrin dia tsy voalaza ho an'ny zaza latsaky ny 6 taona, ary koa ho an'ny olon-dehibe.
Flonase, fluticasone propionate, dia kortikosteroid. Rehefa ampiharina amin'ny lohan'ny orona ny kortikosteroid dia maneho toetra antiprurite, anti-inflammatoire, ary vasoconstrictive izy ireo. Corticosteroids dia mitaona peptides fantatra amin'ny anarana hoe lipocortins, izay mampihena ny fiforonany sy ny famotsorana ireo mpanelanelana amin'ny inflammatoire. Ny vokatry ny Flonase dia manangana ora aorian'ny fampiasana tsy tapaka, ary noho izany dia mety maharitra andro maromaro na herinandro maromaro vao hahatsapa ny tombontsoa feno an'ny Flonase. Flonase dia azo alaina ho toy ny dokotera ary ny over-the-counter. Amin'ny maha-preseta azy dia tavoahangy fofona orona misy tsifotra 120 io. Ny kinova tsy azo ampiasaina dia azo alaina toy ny tavoahangy 60 na tavoahangy 120. Flonase dia azo ampiasaina amin'ny ankizy 4 taona na mihoatra, ary koa ny olon-dehibe.
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Afrin sy Flonase
Kilasy zava-mahadomelina Agonista Alpha-adrenergika Corticosteroid
Brand / status generic Misy marika sy jeneraly Misy marika sy jeneraly
Iza no anarana mahazatra? Oxymetazoline Fluticasone propionate
Inona avy ireo endrika miditra amin'ny zava-mahadomelina? Fanasitranana orona Fanasitranana orona
Inona ny fatra mahazatra? Rano roa na telo isaky ny 12 orona Tifitra iray na roa isaky ny vavorona isan'andro
Mandra-pahoviana ilay fitsaboana mahazatra? 3 hatramin'ny 5 andro Andro maromaro hatramin'ny volana maromaro
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? Olon-dehibe, ankizy 6 taona no ho miakatra Olondehibe, Ankizy 4 taona no ho miakatra
Toetra notsaboin'i Afrin vs. Flonase
Afrin dia aseho amin'ny fitsaboana ny fitohanan'ny orona. Ampiasaina amin'ny marika tsy misy izy io mba hitaomana ny vasoconstriction amin'ny fomba fanaon'ny orona. Tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny mpanelanelana mamaivay na mahazaka aretina i Afrin, izay mety hiteraka fitohanana amin'ny sinus.
Flonase dia famandrihana voatondro hitsaboana rhinitis tsy mahazaka alikaola sy tsy alergika (maharitra maharitra). Ny vokatra fampiasa amin'ny fividianana fanafody dia voamarikao hitsaboana ireo soritr'aretin'ny alikaola ambony mifandraika amin'ny tazo main-tany na ny rhinitis mahazaka. Anisan'ireto soritr'aretina ireto ny orona feno setroka, ny sneeze, ny orona, ny orona mangidihidy ary ny maso mangidihidy sy feno rano. Izy io irery no tsifotra orona avy any ivelany izay mitondra soritr'aretina amin'ireo soritr'aretina rehetra ireo.
toe-javatra Afrin Flonase
Fitohanana amin'ny sinus ENY ENY
Vasoconstriction amin'ny fomba fitsaboana nasal Label tsy misy tsy
Rhinitis alergika tsy ENY
Rhinitis tsy mitambatra tsy ENY
Soritr'aretina alikaola ambony amin'ny ambony tsy ENY
Mahomby kokoa ve i Afrin sa i Flonase?
Ny fiantombohan'ny hetsika Afrin dia 10 minitra, izay manome ny marary haingana ny soritr'aretin'ny orona. Mampalahelo fa ny fotoana fohy ihany no nanolorana anao hevitra: telo andro na latsaka. Ny vokatra feno an'ny Flonase dia mety tsy ho tanterahina mandritra ny herinandro na mihoatra, saingy azo antoka ny fampiasana maharitra. Flonase dia aseho ihany koa hitsaboana bebe kokoa noho ny fitohanan'ny orona. Izy io dia manala ireo soritr'aretina marobe momba ny valin'ny alègique, ao anatin'izany ny orona mihosin-drà, ny fitsikana ary ny maso mangidihidy. Afrin dia tsy misy fiatraikany amin'ireo antony mahatonga ny valiny mahazaka.
Ny fandinihana iray dia nijery ny fampiasana miaraka ny oxymetazoline sy fluticasone hamaritana raha afaka mampitombo ny valin'ny tsirairay amin'ny fitohanana izy ireo. Nampitaha vondrona fitsaboana telo izy: plasebo, oxymetazoline irery, ary fluticasone miaraka amin'ny oxymetazoline. Amin'ity fandinihana ity, ny oxymetazoline dia nampiasaina ela kokoa noho ny faharetan'ny hateloana voatondro. Ny haavon'ny rivotra nasal dia avo kokoa tamin'ny vondrona mampiasa oxymetazoline sy fluticasone. Voamarika ihany koa fa tsy nisy ny fitohanana mafy, milaza fa ny vokany amin'ny oxymetazoline fotsiny dia tokony hohalalinina bebe kokoa. Ny mpitsabo anao dia afaka manampy amin'ny famaritana izay vokatra mety indrindra aminao.
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Afrin vs. Flonase
Matetika i Afrin dia tsy saron'ny fiantohana satria tsy vokatra fanoratana izany. Marina izany na amin'ny drafitra Medicare na amin'ny varotra. Ny vidin'ny antsinjarany amin'ny tavoahangy 15 ml dia mety hahatratra $ 11 eo ho eo. Ny dokoteranao dia afaka mamoaka dokotera ho an'i Afrin, ary miaraka amin'ny tapakila SingleCare dia azonao atao ny mahazo ny kinova generika hatramin'ny $ 5.11.
Flonase, na ny mahazatra, dia mazàna rakotry ny drafi-panafody ara-barotra sy Medicare. Ny vidin'ny antsinjarany ho an'ny Flonase ao anaty tavoahangy misy 120 sprays dia mety ho $ 28 fa miaraka amin'ny tapakila, ny marary dia afaka mandoa $ 11- $ 12 miaraka amin'ny preseta.
Voasaron'ny fiantohana mahazatra? tsy ENY
Matetika rakotry ny Medicare? tsy ENY
Fatra mahazatra Tavoahangy 15 ml Tavoahangy 16 g
Copie Medicare mahazatra n / A Miovaova, fa matetika latsaky ny $ 10
Sarany SingleCare $ 5- $ 14 $ 11- $ 32
Ny voka-dratsin'ny Afrin vs. Flonase
Fantatra fa miteraka fahasosorana vetivety sy eo an-toerana ny mucosa orona i Afrin, ary izany dia mety hiteraka fitsinjarana. Tokony handalo ao anatin'ny minitra vitsy fitantanana izany. Raha ampiasaina mandritra ny telo andro mahery i Afrin, dia mety hiaina fitohanana mihombo ny marary. Ity trangan-javatra ity, izay fantatra ihany koa amin'ny hoe rhinitis medicamentosa, dia inoana fa naterak'izany rehefa nanapaka ny famatsian-dra ireo sela teo an-toerana ny vasoconstriction notarihin'i Afrin. Miteraka fivontosana sy fivontosana izany. Ny fahatsapana ny fitohanana mafy dia voalaza fa mahatsapa ratsy kokoa noho ilay fitohanana tany am-boalohany nataon'i Afrin.
Flonase dia manana aretin'andoha somary avo lenta 16% ny marary mahatsapa aretin'andoha taorian'ny fitantanan'i Flonase. Ny voka-dratsin'ny fahita mahazatra dia ny mandeha ra na ny epistaxis.
Na i Afrin na i Flonase dia mety hiteraka fahasosorana eo an-toerana amin'ny mucosa orona.
Ity tabilao manaraka ity dia tsy natao ho lisitra feno amin'ny voka-dratsy mety hitranga rehetra. Azafady mba manatona ny dokotera na ny mpivarinao anao raha mila lisitr'ireo vokatra hafa mety hitranga.
Aretin'an-doha tsy n / A ENY 4% -16%
fanina tsy n / A ENY 1% -3%
Marary / Misoroka tsy n / A ENY 3% -5%
Fahasosorana eo an-toerana ENY Tsy voafaritra ENY 4% -6%
Fitomboan'ny tsindry intraocular tsy n / A ENY 1% -3%
Epistaxis tsy n / A ENY 6% -12%
Valan-javamanitra moka tsy n / A ENY 3% -8%
Nasopharyngitis tsy n / A ENY 8%
Sinitis mahery tsy n / A ENY 5%
Ra ao amin'ny mukosa orona tsy n / A ENY 1% -3%
Orona maina ENY Tsy voafaritra ENY 1% -3%
Ny fitohanana eo amin'ny orona ENY Tsy voafaritra tsy n / A
Aretin-tenda tsy n / A ENY 1% -3%
Loharano: Afrin ( DailyMed ) Flonase ( DailyMed ).
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Afrin sy Flonase
Na dia samy manana ny vokany eo an-toerana aza i Afrin sy i Flonase izay ampiharina ao anaty orona indrindra, misy fanafody hafa mety hifaneraserana amin'izy ireo.
Ny derivatives ergot dia kilasin'ny fanafody izay azo ampiasaina amin'ny fitsaboana migraines. Migranal dia tsiranoka avy amin'ny orona, izay miasa amin'ny alàlan'ny famoahana vasoconstriction. Ny fampiasana afrikanina Afrin, izay miteraka vasoconstriction koa, dia hiteraka vasoconstriction be loatra. Tokony hialana io fitambarana io.
Esketamine dia vokatra orona antidepressant entina indray mandeha na indroa isan-kerinandro. Samy Afrin sy Flonase dia mety hampihena ny vokatry ny esketamine. Raha ilaina ny decongestant nasal amin'ny andro fanaovana doka esketamine, ny decongestant-nify dia tokony omena adiny iray farafahakeliny alohan'ny esketamine.
Ity tabilao manaraka ity dia tsy natao ho lisitry ny fifanakalozana zava-mahadomelina azo atao. Azafady mba jereo ny mpitsabo anao raha mila lisitra feno ianao.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina Afrin Flonase
Atomoxetine Mpanakana ny Norepinephrine ENY tsy
rongony Cannabinoids ENY tsy
Desmopressin Analog Vasopressin tsy ENY
Ergotamine Derivatives Ergot ENY tsy
afa-mandositra Mpanohitra mpandray ny NMDA ENY ENY
Fentanyl (serum orona) Opioid ENY tsy
Tedizolid antibiotika ENY tsy
Doxepin Antidepressants Tricyclic ENY tsy
Fampitandremana avy amin'i Afrin vs. Flonase
Afrin dia natao hampiasaina amin'ny fampiakarana doka isaky ny 12 ora tsy mihoatra ny telo andro. Ny fampiasana an'ity vokatra ity mihoatra ny atoro anao dia mety hiteraka fitohanana mafy. Afrin dia mety hiteraka tsy fahazoana aina vetivety toy ny fanindronana, mangidihidy, na fandoroana ao amin'ny lalan'ny orona.
Flonase dia mety hampiadana ny fanasitranana aorian'ny fitsaboana amin'ny orona na fandidiana ary tsy tokony hampiasaina raha tsy eken'ny dokoteranao. Raha toa ka mihinana «steroid» na fanafody fanefitra mahery setra toy ny zava-mahadomelina VIH ianao dia miresaha amin'ny dokotera na farmasinao alohan'ny fampiasana Flonase. Ny fanaintainana na ny fitsikana dia mety hitranga avy hatrany aorian'ny fitantanana. Raha tsy mihatsara ny soritr'aretina ainao aorian'ny fampiasana fito andro ny Flonase, manatona ny dokoteranao.
Ny kaontenera manasitrana orona dia natao hampiasa olona tokana. Ny fizarana kaontenera manasitrana orona dia mety miteraka aretina. Ny tsifotra orona dia tsy tokony hofafazana amin'ny maso na amin'ny vava.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Afrin vs. Flonase
Inona ny Afrin?
Afrin dia decongestant-tsifotra diso tafahoatra. Misy oxymetazoline, izay agonista alpha-adrenergic izay miteraka vasoconstriction eo an-toerana. Mihetsika haingana i Afrin, saingy tsy tokony ampiasaina mandritra ny telo andro misesy.
Inona no atao hoe Flonase?
Flonase dia tsiranoka orona kortikosteroid azo ampiasaina ho fanafody sy fametahana latabatra. Izy io dia misy fluticasone fampiasa mavitrika, izay mampihena ny famokarana mpanelanelana amin'ny inflammatoire amin'ny làlan'ny orona. Flonase dia mahatratra ny vokany feno aorian'ny andro na herinandro maromaro ary azo antoka ny fampiasana maharitra.
Mitovy ve i Afrin sy i Flonase?
Raha samy Afrin sy Flonase dia samy spray an'ny orona izay manamaivana ny soritr'aretin'ny fitohanana orona, tsy mitovy izy ireo. Afrin dia vasoconstrictor eo an-toerana izay mametra ny fidiran'ny tsiranoka amin'ny lalan'ny orona. Flonase dia steroid iray manelanelana ny valiny mamaivay ateraky ny valin'ny allergy.
Tsara kokoa ve i Afrin sa i Flonase?
Afrin dia manome valiny haingana kokoa amin'ny fitohanana miaraka amin'ny fiandohan'ny hetsika ao anatin'ny 10 minitra. Tsy ampirisihina hampiasaina mihoatra ny telo andro ianao. Ny Flonase dia miadana kokoa hanamaivanana ireo soritr'aretin'ny fitohanana nefa azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Ny flonase dia mandaitra amin'ny soritr'aretina hafa alikaola toy ny orona, ny sneeze ary ny maso mangidihidy.
Afaka mampiasa Afrin na Flonase ve aho mandritra ny fitondrana vohoka?
Nisy trangan-javatra mahatsiravina momba ny foetus mifandraika amin'ny fampiasana Afrin tamin'ny trimester voalohany tamin'ny fitondrana vohoka. Na dia tsy naseho aza fa manimba ny fampiasana indray mandeha amin'ny tara-bevohoka, dia tsy decongestant-nify ilain'ny vohoka i Afrin. Ny flonase dia mety azo antoka ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka, na eo aza ny fanafody decongestant na steroid hafa dia mety misy tahiry fiarovana bebe kokoa. Manantona ny dokoteranao momba ny safidy decongestant nasal tianao.
Azoko atao ve ny misotro toaka Afrin na Flonase?
Afrin sy Flonase dia azo entina soa aman-tsara amin'ny marary mihinana toaka.
Afrin ve dia spray an'ny orona steroid?
Afrin dia tsy steroid. Izy io dia agonista alpha-adrenergic izay miasa amin'ny alàlan'ny fampidirana vasoconstriction ao amin'ny làlan'ny nasal.
Ny flonase ve dia antihistamine na decongestant?
Flonase dia tsy antihistamine na decongestant mivantana. Manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny fitohanan'ny orona amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fidiran'ny mpanelanelana amin'ny inflammatoire navoaka nandritra ny valin'ny allergy.
Rahoviana aho no tokony handray an'i Flonase maraina na alina?
Ny flonase dia azo atao amin'ny fomba iray amin'ny fomba roa. Ny marary dia afaka manome tsiranoka iray isaky ny vavorona isaky ny maraina sy / na hariva (hatramin'ny spray efatra manontolo mandritra ny 24 ora), na ny marary dia mety mandrotsaka tsifotra roa isaky ny vavorona amin'ny fotoana iray, maraina na hariva.
Fanontaniana hapetraka amin'ny dokoteranao amin'ny fizahana isan-taona
Mikasa ny dia? Miomàna amin'ireto torohevitra ireto mba tsy hisakanan'ny COPD anao
izay vicodin mahery na tylenol 3
dia vitamina d sy vitamina d3 zavatra mitovy
inona no hitranga raha maka drafitra ianao b
olona firy ao amintsika no voan'ny aretim-po
ny fomba ahazoana miakatra haingana ny tosidra